जनवरी 29, 2019	समाचार
यो अनौठो छैन कि अनलाइन क्यासिनोहरूले बोनसहरू प्रस्ताव गरेर खेलाडीहरू आकर्षित गर्न खोज्छन् - बस बोल्ने, निशुल्क पैसा - कि खेलाडीले कैसीनोसँग दर्ता गर्दा चाँडै प्रयोग गर्न सक्दछ। यद्यपि, क्रममा एक खतरा बढ्न नदिने, क्यासिनोहरू wagering आवश्यकता लागू गर्न लाग्दछन्। आउनुहोस् हामीलाई यो के लागी एक नजिकको नजर लिनुहोस्। ब्ल्याकडाइराम क्यासिनो
एउटा जागो आवश्यकता (प्लेथ्र आवश्यकताको रूपमा पनि जानिन्छ) प्राय: क्यासिनोका अपरेसनका लागि आवश्यक तत्व हो। निस्सन्देह, एक खेलाडीको दृष्टिकोणबाट, यो सबैभन्दा अपील नमुना होइन। यसैले खेल पृष्ठ यस्तो तरिकाले डिजाइन गरिएको छ कि तपाइँ यसलाई पुन: प्राप्त गर्न प्रयास गर्नु अघि तपाईंले बोनस बारे केहि पनि केहि पनि सूचना नगर्न सक्नुहुनेछ। अनिवार्य रूपमा, हामी सावधानीपूर्वक नियमहरू अध्ययन गर्ने सिफारिस गर्न सुझाव दिन्छौं जुन शर्तहरू वर्णन गर्दछ जुन बोनस तपाईंलाई दिइनेछ। यो त्यहाँ छ कि तपाईंले नाउ-त-सीधा भइरहेको आवश्यकता बारे जानकारी पाउनुहुनेछ। यदि तपाइँ यसलाई पहिले फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, पृष्ठमा सानो फन्टको खोजी गर्नुहोस् वा बोनस आफै वर्णन र प्रस्तावित विभिन्न पदोन्नति पृष्ठ हेर्नुहोस्। uptownaces
Wagering आवश्यकता को गस्ट गर्न को लागी
त्यसोभए, यो सारमा के हो? यो आवश्यकता एक गुणक हो जसले तपाइँलाई खेल्न सक्ने समयको सङ्ख्या प्रतिनिधित्व गर्दछ तापनि तपाइँले कुनै पनि winnings (केही अवस्थाहरूमा, बोनसको साथमा, नियम पनि जम्मा चिन्ता हुन सक्छ) लाई सक्षम गर्न सक्षम हुनुभन्दा पहिले प्रस्ताव गरिएको बोनस। साधारणतया, प्लेथ्रो समयको संख्या सेट गर्ने कम्पनीको जोखिम व्यवस्थापन गतिविधिहरूको भाग हो। अधिक 'प्रस्तावित मुफ़्त रकम' को राशि, अधिक सम्भव छ कि खेल को समय को माध्यम ले अधिक हुनेछ। Playthrough समयको संख्या फरक क्यासिनोहरूमा भिन्न हुन सक्छ - यो 15-20 समयमा सुरु हुन सक्छ र लगभग 40 सम्म पुग्न सक्छ जुन बोनसको आकर्षणको आनुपातिक हो। स्लोटो नगद कैसीनो
यो कसरी देखा पर्दछ एक नजर राख्नुहोस्। उदाहरणको लागि, चलोको कल्पना गर्नुहोस् कि एक प्लेथ्र आवश्यकताले बोनस खेल्ने बीस पटक मार्फत प्रयोग गर्दछ। प्रस्तावित रकम बराबर $ 50 हो, जुन अनलाइन साइन अप द्वारा प्लेयर को लागि जितनी छ त्यो साइन अप गर्दछ। चलो भन्नुहोस् कि तपाईंले पूर्ण रकम प्रयोग गर्नुहुनेछ र तपाईंको जम्मा $ 100 बराबर छ। हाम्रो उदाहरणमा, दिएको आवश्यकता को योगफल को रूप मा निर्धारित हुनेछ बोनस र सँगै जम्मा हुन्छ। धेरै सरल गणनाले हामीलाई देखाउँछ कि तपाइँले प्ले गर्नुहुने शर्तहरू $ 2000 को लागी पहिलो रकम हुनेछ (हामीले केवल बोनस को 100 र 20 द्वारा जम्मा गरीएको)। जब यो हुन्छ, तपाईंले प्लेथ्र आवश्यकता पूरा गर्नुहुनेछ र winnings हटाउन सक्षम हुनेछ।
के बजाउने आवश्यकता एक खेलबाट अर्कोमा भिन्न हुन्छ?
प्लेथ्र आवश्यकताहरूको प्रणाली सरल होइन। कैसीनोहरूको लागि फरक फरक फरक फरक छैन खेल। सम्बन्धित रकमहरूले तपाइँलाई अन्ततः प्लेथ्र आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्दछ। प्रतिशतहरू क्यासिनोहरूले स्वतन्त्र रूपमा सेट गरिन्छन् र उद्योगमा ठूलो रूपमा भिन्न हुन्छन्। तथापि, त्यहाँ केही स्पष्ट प्रवृत्तिहरू छन् - उदाहरणका लागि, ब्लेक, रूले र केहि अन्य खेल आवश्यकता को पूरा गर्न (या धेरै कम योगदान) को आवश्यकता छैन, जबकि सामान्यतया यो 100% स्लट्स वेजर्स शर्त मान को गणना गर्दछ जो मा गणना गर्दछ। उद्योग मा केहि अपवादहरु को "सफ्ट प्ले बोनस सिस्टम" को प्रयोग गरेर कैसीनो हुन सक्छ। - तिनीहरू भरोसा गर्छन् Microgaming सफ्टवेयर र त्यही स्थानमा समान स्तरहरू छन् भनिन्छ।
यो कसरी काम गर्दछ भनेर प्रदर्शन गर्न, हामीलाई तपाईंलाई एक उदाहरण दिनुहोस्। कल्पना गर्नुहोस् कि क्यासिनोले $ 100 को बोनस प्रदान गर्दछ, जसले खेलाडीको लागि 20-टाइम प्लेथ्र आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ। दृष्टान्तको खातिर, खेलाडीले स्लट्समा $ 30 शर्त र ब्ल्याकैक, रूले र भिडीयो पोकरमा $ 20 शर्त लगाएको मानिन्छ। यस अवस्थामा हामी प्लेथ्र आवश्यकता अनुसार योगदान गणना गर्न सक्छौं: 100% x $ 30 (स्लॉट) + 25% x $ 20 (ब्ल्याक ज्याक) + 10% x $ 20 (रूले) + 80% 20 को (भिडियो पोकर) । सबै जोडेर तत्व, हामी $ 53 मा आइपुग्छ - यो $ 2000 प्लेथ्र आवश्यकता को पूरा गर्न को लागी योगदान दिइएको छ। कालोलोतुसकासिनो
* कृपया, ध्यान दिनुहोस् कि उदाहरणमा प्रयोग गरिएका नम्बरहरू केवल प्रदर्शनको खातिर मात्र प्रयोग गरिन्छ। प्ले गर्नु अघि, एक विशेष क्यासिनो द्वारा प्रदान गरिएको विशेष बोनसको लागि नियमहरू र नियमहरू ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्, किनकि तिनीहरू धेरै भिन्न हुन सक्छन्।
द ड्रैगन शर्डको पावर
Beginners को लागि सर्वश्रेष्ठ भिडियो पोकर रणनीतियाँ
अनलाइन क्यासिनो: Wagering आवश्यकता के हो? अपडेट गरिएको: नोभेम्बर 29, 2019 लेखक: Damon
1.0.1 के तपाईंको मालिक धेरै जान्दछ?
1.0.2 ज्याकपोटसिटीले 20 लाई फर्काउँछ!
1.0.3 शाजम! बाबेल बाइबिल सिटहरू
1.0.4 पेन्सन के हो?
1.0.5 Microgaming मा कुनै जम्मा संग साइन-अप बोनस
1.0.6 आइसल्याण्डिक शहरहरूमा क्यासिनो बोनस
1.0.7 द ड्रैगन शर्डको पावर
1.0.8 सिडनी बायोमेडिकल विशेषज्ञहरूले खेल परिवर्तन गर्दै
1.0.9 विषाक्त नरसंहार भनेको के हो?
1.0.10 Beginners को लागि सर्वश्रेष्ठ भिडियो पोकर रणनीतियाँ
अनलाइन क्यासिनो: के हुन् ...